UK: Dad fara badan oo diinta islaamka soo galay | WWW.JUUNGAL.COM
← Tirada magangalyo doonka oo kala bar hoos u dhacday
Xukuumadda Netherlands oo sheegtay inay dalkeeda ka mamnuucayso Jaadka oo ay Soomaali badan cunaan →
Cilmi baaris laga sameeyay dalkaasi Ingiriiska ayaa lagu soo bandhigay in tirada dadka diinta Islaamka soo galay ay aad u sareyso. Cilmi baarista ayaa lagu sheegay in ilaa 100,000 oo qof la aamisanyahay in Muslim noqdeen 10-kii sano ee la soo dhaafay.
Baaritaanka oo uu sameeyay urur lagu magacaabo Faith Matters ayaa lagu sheegay in ay adagtahay in la ogaado tirada dhabta ah ee dadka diinta Islaamka qaatay maadama afti ururinta laga sameeyo Ingiriiska aan lagu darin qofka diintiisa.
Si kastaba haa ahaatee, ururka ayaa sheegay in qiyaastooda ay tahay in sanadkasta ay diinta Islaamka qaataan ilaa 5000 oo qof iyadoo sanadkii 2001 ay ingiriiska ku noolaayeen dad gaaraya 61,000 oo Muslim noqday.
Cilmi baarista ayaa sidoo kale waxay aad ugu dhowdahay tirada laga soo wariyay dalalka Faransiiska iyo Jermalka oo la sheegay in sanadkasta ay diinta Islaamka soo galaan dad gaaaraya 4,000 qof wadankasta.
Qubarada sameeyay cilmi baarista ayaa sheegay in sababta ka dambeysa in dadka faraha badan ay diinta Islaamka qaataan ay tahay maadaama Islaamka aad looga hadalhayo warbaahinta reer galbeedka taasoo dhalisay xiiso gaar ah. Dadka ayaa bilaaba in ay raadiyaan macluumaad ku saabsan Islaamka taasoo dhalisa in qaar badan ay la dhacaan Islaamka.